Gini mere Skype ji jidesie na ijikọ? - Skype
Isi > Skype > Skype enweghi ngwụcha ejikọta - a ngwọta
Skype enweghi ngwụcha ejikọta - a ngwọta
Gini mere Skype ji jidesie na ijikọ?
Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbuijikọkaSkype, gaa naSkypeStatus page elele maka ihe ọ bụla ugbu a na nsogbu. ... Nyochaa na ị nwere nke kachasị ọhụrụ nkeSkype. Lelee gị nche software ma ọ bụ Firewall ntọala iji jide n'aka na ha na-agaghị igbochiSkype.
Agwala ndi mmadu ihe abuo ebe a Don Georgevich tinyere JobInterview Tools, ma taa achoro m igwa gi ihe banyere ihe ikwesighi ikwu n’oru oru gi; kpọmkwem, ise ihe na ị na-ekwesịghị ikwu na ị na-ewetara gị Mention, udi, ma ọ bụ udi Ajụjụ ọnụ n'ụzọ ọ bụla. Ọ bụrụ na ịmee, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe kpatara ịchụpụ gị na usoro ahụ ozugbo. 1. 1.
Anaghị ekwu merụsịrị banyere gị ụlọ ọrụ. Ekwula okwu ọjọọ banyere ndị mmadụ. Asị na ị chọghị ịrụ ọrụ ebe ahụ; Echere m, ikekwe ị kpọrọ ịrụ ọrụ ebe ahụ asị, ikekwe ị kpọrọ onye isi gị asị, mana mgbe ha jụrụ gị, “Ọ masịrị gị ịrụ ọrụ ebe ahụ? Ndi ọga gị masịrị gị? 'Azịza ya bụ,' Ee, m mere.
Enwere m mmasị n’ịrụ onyeisi m ọrụ. M mmasị ndị mmadụ. Enwere m mmasị na ụlọ ọrụ ahụ.
Omenala ha masịrị m. M mmasị ihe nile banyere ha. Ọ bụ na ọ bụ ihe ihere m ga-aga.
Ọ dị m nwute ịga, mana m na-achọ ahịhịa na-acha ahịhịa ndụ, ohere ndị ka ukwuu. Ana m achọ ọrụ ọzọ. ”Kwuo ihe ọ bụla ma e wezụga na ọ naghị atọ gị ụtọ ịrụ ọrụ ebe ahụ, ihe na-adịghị amasị gị, ma ọ bụ ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-enwe na-arụ ọrụ e ma ọ bụ na-adịghị dị ka gị na onyeisi, ị ga-ekwu otu ihe banyere ya n'oge na-adịghị ma ọ bụrụ na o goro unu; Ị ga-ahụ ihe mere ghara dị ka ya, ị ga-ahụ ihe mere ghara dị ka gị na onyeisi. Ndị mmadụ anaghị enwe mmasị n’ebe ọrụ ha anaghị ewe oge tupu ebe ọhụrụ ahụ amasị ha. nke ahụ bụ ọdịdị mmadụ.
N’ihi ya, ị chọghị ịgwa ha nke ahụ n’ajụjụ ọnụ ahụ; n'agbanyeghị otu o si pụta, ọbụlagodi na ha jụrụ gị: Kedu ka ụlọ ọrụ a si masị gị? , a maara gi dika cancer. Ha na-kwuru ga-carcinogenic ọ bụrụ na ị na-na na na ụdị onye ejegharị na-ekwu okwu banyere ndị nile na ma ọ bụ na ụlọ ọrụ, ụkpụrụ nduzi, ihe ndị ị na-adịghị dị ka. Tufuo ndị mmadụ.
Ugbu a, m maara na ọ bụghị na ị na Ị maara ihe mere? Amaara m na ọ bụghị gị n'ihi na ị nọ ebe a taa na-ele m anya ma na-agbalị imezi onwe gị. Na ndị na-agbalị ka mma onwe ha, ha 'm pụtara, n'aka, e nwere ike inwe ihe banyere ha ụlọ ọrụ na ọ bụghị ha ka na ọ pụrụ ịbụ nnọọ ezigbo ihe mere ha mere abụghị ka ụfọdụ ihe. Naanị ekwula na N'ajụjụ ọnụ ahụ; Ekwula na n'ụzọ ọ bụla, udi, ma ọ bụ ụdị.
Dịkwa mma. Ya mere ọzọ n'ebe a; Arụtụ 2.2.
Ọtụtụ achọ ịbata-etinye na-ekpebisi ike na-a ọrụ na ha na-asị: 'M ga-eme ihe niile. O nweghi ihe o mere; Aga m eme ihe ọ bụla. ”Ọfọn, ndị a na-abụkarị ndị na-anaghị arụ ọrụ ugbu a (ikekwe ọnwa isii ma ọ bụ itoolu, ikekwe ọbụlagodi afọ abụọ) na-achọsi ọrụ ike ma na-eme ihe ọ bụla.
Ma mgbe ị na-aga n'ime Ajụjụ ọnụ na-ekwu, 'know maara ihe? M ịma ihe ọ bụ; Aga m eme ya, a ga m eme ihe ọ bụla, nye m ya. Ọ bụrụ na i mee, ị ga-egosi ụfọdụ obi nkoropụ na-anaghị ada nke ọma; ị chọrọ ịbanye na Ajụjụ ọnụ, ị chọrọ ikwu banyere ihe ị nwere ike ime na uru ọ bara ị nwere ike iweta, yana ị nwere ọ excitedụ ime ya; nke a bụ ihe ị chọrọ Ị adịghị nnọọ chọrọ ikwu, 'Yeah, Aga m eme ihe ọ bụla i nwere. Aga m eme ya.
Ana m ekpochapụ ala. Achọghị m ịma. 'Ọfọn, ị chọrọ ịga n'ebe ahụ; gwa ha ihe ị chọrọ ime.
Have ga-ejide ụkpụrụ gị. Ikwesiri ijide okwukwe gị na ihe ị chọrọ ime. N'ihi na ọ bụrụ na ha dị nnọọ na-enye gị ihe, ma ọ bụrụ na ha dị nnọọ na-enye gị ụfọdụ ọrụ ebe ahụ, na ọnwa abụọ na ị ga-enwe obi ụtọ na ya.
M na-ekwe gị nkwa nke ahụ. Ndị were gị n'ọrụ maara nke ahụ. Ha maara na ọ bụrụ na ị na-aga n'ebe ahụ ma na-asị, 'Aga m ewere ihe ọ bụla i' na ha na-enye gị ya, abụọ ma ọ bụ atọ ọnwa gasịrị ị ga-asị, 'Ị maara ihe? Na eme nzuzu.
Achọghị m ime ihe a ọzọ ”ị ga-aga. You're na-aga ịhapụ ha elu ma kpọrọ nkụ. Ma mgbe ahụ ha na-egbusi oge dị ukwuu wee gbaa mmadụ ajụjụ ọnụ, ọ na-efu ha nnukwu ego iji merie echiche na-ezighi ezi dị ka gị.
Yabụ ọ bụrụ na ị banye ebe ahụ agwala ha na ị ga-eme ihe ọ bụla ma ọ bụ were ozi ọ bụla nke enweghị olileanya. Na na na, ka na-aga ka nọmba 3.3.
Ya mere, ọ bụrụ na ha ajụọ gị, 'Kọọrọ m banyere onwe gị' ma ọ bụ 'Gịnị bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị ị maara eme nke ọma?' Agwala ha na ị bụ “onye na-amalite ịmalite ihe ngwa ngwa ma ọ bụ onye na-amụ ihe ngwa ngwa, ma ọ bụ na ị na-atụ anya ihe ga-esi na ya pụta; ihe niile ahụ. Ugbu a ihe ị chọrọ ikwu bụ otú ị nwere ike ime ihe ndị a; Wantchọrọ itinye ya na gburugburu. Yabụ ọ bụrụ na nke a dị ka ọnọdụ onye ndu, ị chọghị ịsị, “Abụ m nnukwu onye ndu.” Chọrọ ikwu maka otu i si duru ndị mmadụ.
Chọrọ ikwu banyere otu ndị dị iche iche; ìgwè na ị na-ewu na-etinye ọnụ na-arụ ọrụ na kpọmkwem oru ngo. Ha na-achọ ikwu banyere otú i mere ya. Ọ bụghị naanị na ha chọrọ ịsị na ị bụ onye rụpụtara ihe.
Chọrọ ikwu maka oru ngo nke i mechara na i mechara n'oge na n'okpuru mmefu ego na ịchọrọ ikwu maka nkọwa. Nsonaazụ niile gbadoro ụkwụ ma ntuziaka ga-apụta n'ihe ị na-ekwu. Nke a uche ọ? Ya mere, na-aga na-dị nnọọ ikwu m, m a na-arụpụta na-abara onye ndú.
Debe ya na gburugburu ha ma gosi ha otu ị siri mee nke a tupu, mgbe ahụ ozi na-akpata ga-abụ, hey, onye ahụ, ị ​​maara, ha bụ ezigbo ndị isi na-arụpụta ihe. Nke ahụ bụ, ọ bụ akara na ị na-etinye mgbe e mesịrị. Na na na, na-eme ka uche? Ya mere, na-aga n'ebe ahụ na dị nnọọ gwa ha na i mere ihe, ọ bụghị otú ị ga-eme ha.
Ọ dị mma ka anyị gaa na nke ọzọ. 4. Mgbe ha na-ajụ gị ajụjụ anyị na-ekwu, 'Ị maara otú ime nke a?' Adịghị agwa ha na ị na-amaghị otú o ihe interviewer m na-amaghị otú na-aga, ma ọ bụ na m na mgbe hụrụ ma ọ bụ na m na-enweghị echiche banyere.
M pụtara, na ihe ndị kasị njọ na ike ga-ekwu; ọ bụrụgodị na ọ bụ eziokwu. Mana ihe ị chọrọ ikwu bụ, “know ma gịnị? Ka m chee maka ya nwa oge ”mgbe ahụ ị ga-eche maka ya. Youchọrọ ijikọ ya na ihe yiri ya.
Ya mere, ị na-asị: 'Ị mara ihe? Emeghị m nke ahụ, mana m mere ihe yiri ya. ”Nke ahụ na-egosikwa ha na ị maara ma ọ dịkarịa ala nghọta nke ihe ha na-ekwu. N'ihi na ọ bụrụ na ị na-adịghị aghọta ajụjụ, na nke ahụ bụ a nnukwu red ọkọlọtọ; nnukwu ihe ịrịba ama megide gị.
Ma eleghị anya, ọ ga-abụrịrị, ajụjụ gbasara iru eru. Ma mgbe ị maara gbasara ikike ịjụ ajụjụ, ndị a bụ ihe kachasị atụ. Ya mere ọ bụrụ na ị na-atụ uche a amaka ajụjụ ma ọ bụ abụọ; nke ahụ nwere ike ịbụ ya.
Na pụrụ ikpochapụ unu na N'ajụjụ ọnụ. Ị nwere ike na-mere maka; naanị ajụjụ abụọ. One, i nwere ike pụọ na ya, kama ọ na-adabere otú dị mkpa ajụjụ bụ.
N'ihi na ajụjụ ruru eru gụnyere ọtụtụ isi. Ma ọ bụrụ na ị na-amaghị a ọtụtụ ihe ndị bụ isi banyere ihe ị maara, ị na-amaghị ọtụtụ ihe banyere ihe ị na-eme. Ya mere, agwala ha na ị maghị.
Agbalị mgbe nile ịgakwuru ihe; jikọọ ntụpọ maka ha. Ma eleghị anya, i nwere na-sere na nyeere ebe a na-asị, 'Ị mara ihe? Enwere m ike iche maka ya otu nkeji ma anyị nwere ike ịga ọzọ? ”Ha ga-asị, Ee. Ị sere a nyeere Usoro ọtụtụ mgbe, ma eleghị anya, ihe karịrị otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ, na ọ bụ ya; Ị na-mere.
Yabụ ikwesiri iwe obere oge iji chee otu esi ejikọ ahụmịhe gị na ihe ha na-ekwu maka ya, ama m na ị nwere ike. Ọfọn, ka anyị rute n’ikpe-azụ ebe a; Nọmba 5.5 ajụọla ajụjụ ọnụ n'oge a, 'Gịnị ka ụlọ ọrụ gị na-eme ebe a?' Nke ahụ bụ ihe kacha njọ nwere ike ime. Ngalaba ahụ, ngalaba, ma ọ bụ ọrụ ha na-arụ ma ọ bụ ihe.
Unu ịjụ ha ihe ha na-eme ebe a. Ọ bụrụ na ị maraworị nke a, jụọ ha maka nkọwa gbasara ụfọdụ n'ime ihe ha na-eme. adịghị aga na e blindly na dị nnọọ ikwu, 'Ọfọn, ihe ị na-eme ebe a? Nke ahụ na-ada ụda.
Echere m na m ga-achọ ime nke ahụ. 'Nke ahụ bụ ihe kacha njọ ị nwere ike ikwu banyere ịnụ ọkụ n'obi maka ọrụ a ma ọ bụ ihe ọ na-eme. Ọ na-egosi na ị na-akwadebe maka Ajụjụ ọnụ.
Taghị oge nyocha ụlọ ọrụ a ma ọ bụ ọnọdụ gị. Ọ nwere ike ikwu na ị gosipụtara ma eleghị anya ọrụ ahụ masịrị gị. Nke a abụghị otu o si arụ ọrụ.
Nke a abụghị otú ọ na-arụ ọrụ si n'ebe. Enwere ọtụtụ ndị na-achọ ọrụ na-achọ ọrụ ma ha ga-eti gị ihe ugboro iri. Ha ga-abụ nke ukwuu hotter karịa gị.
Ha ga-anọ n’egwuregwu ha. Ha ga-ekwu maka ahụmịhe ha dịka ha metụtara ọrụ ahụ. Ị ga-ama ihe a ụlọ ọrụ na-eme.
Ga-amara; I leela ya anya, gịnwa nwekwara ike. Ya mere, mee usoro ahụ tupu ajụjụ ọnụ gị ọzọ ma wepụta oge nyochaa ọnọdụ ahụ. Chịkọta ọtụtụ ihe ọmụma dị ka ị nwere ike ka ị nwee ike ịbanye ebe ahụ ma ugbu a ị nwere ike.
Jụọ ha ajụjụ ga-enyere gị aka iru eru maka ọrụ a na ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ebe ịchọrọ ọbụlagodi. Echere m, ọ bụrụ na ị na-eche banyere ya, nke a bụ ajụjụ ọnụ. Are nọ ebe ahụ ị na-agwa ha okwu ma na-agba ha ajụjụ ọnụ.
Gbara ha ajụjụ ọnụ iji hụ ma ọ bụ ihe ị chọrọ ime. Nke a bụ igodo n’ajụjụ ọnụ. Jisie na gị ajụjụ ọnụ ọzọ.
Tupu ị gaa na nyocha gị ọzọ ugbu a, m ga-akwado ịkwado ịnweta otu Job Interview Tools Complete Interview Response Guide. Nke a bụ ngwa ngwa download. Ị nwere ike ibudata ya dị ka a PDF e-akwụkwọ, ị nwere ike nweta ya dị ka mp3, isiokwu, audio, ma ọ bụ ọbụna na-ebipụta.
Akwụkwọ a nwere ihe dị ka ajụjụ ọnụ na azịza 140 dị iche iche. Ọ na-abanye zuru ezu banyere usoro STAR na nsogbu gbasara omume; ebe itinye ọnọdụ, ọrụ, ihe na nsonaazụ. Enwere m ihe dị ka ajụjụ 40 ebe a na-akọwa nke ahụ.
Aga m egosi gị otu esi aza: 'Gwa m banyere onwe gị', 'Gịnị mere ịchọrọ ịrụ ọrụ ebe a?'? Gịnị mere unu na ịkwụsị ikpeazụ gị ọrụ? Ntuziaka a ga - enyere gị aka ịkwadebe 100 pasent maka ajụjụ ọnụ ọ bụla. M mere ike ikwu na ọ. Ọ na-efu banyere $ 50.
Can nwere ike nweta ya site jobinterviewtools.com. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ, e nwere ihe audio version.
Nwere ike ibudata egwu egwu niile. I nwere ike ibudata ha na ekwentị gị ma gee ha ntị. I nwere ike na-anụ ajụjụ dị ka ị na ụgbọala na-arụ ọrụ na ọbụna ụfọdụ ndị na-ege ntị nke ajụjụ ndị a na-abụghị na-adọba ụgbọala ọtụtụ.
Ha na-abịa ọrụ na N'ajụjụ ọnụ dị ka otu awa tupu na ha ga-dị nnọọ na-ege ntị ajụjụ tupu ha na-aga n'ime. Ya mere, ọ na-etinye gị n’ọnọdụ dị elu, steeti dị elu, mgbapụta, ọnọdụ ike tupu ajụjụ ọnụ ahụ. Yabụ, jide akwụkwọ a; Ọ dị mma, ọ bụ ezigbo akwụkwọ.
Ọ ga-enyere gị a otutu. Ọ na-a gburugburu ruo ihe karịrị afọ 10. M na-eme ka ọ dị ọhụrụ oge niile.
Na otu n’ime ihe kachasị mma gbasara ntuziaka a nke na-enweghị ntuziaka ndị ọzọ nwere; Nwere ike ịga Amazon zụrụ akwụkwọ, ha nwere ajụjụ na azịza, mana ntuziaka a nwere enyemaka m. Ya mere ọ bụrụ na ị na-rapaara na ajụjụ ọnụ ma ọ bụ nwere ajụjụ banyere ihe, ị nwere ike kpaliri m na m ga-aza; ọ bụghị naanị ụmụ akwụkwọ kọleji ọ bụla ma ọ bụ ndị nọ ebe a; Get nweta m. Ha nwetara m; M gị nchịkwa, ma ọ bụrụ na i nwere nke a na ndu m gị nchịkwa na i nwere ike kpaliri m ozugbo m ga-esi azụ gị n'ime ụbọchị ma ọ bụ abụọ nke mbara ala nke ga-eme ya - ọ bụla ọzọ bụ onye so dee na-ahapụ gị email ajụjụ banyere ya akwụkwọ maka enyemaka; Ana m ekwe gị nkwa.
Lee anya na Amazon; Enwere ọtụtụ narị akwụkwọ ebe ahụ ma ha niile nwere ajụjụ na azịza ma ọ nweghị onye ọ bụla n’ime ha tinyere adreesị ozi-e na ntuziaka ha ka ha zitere ha ịrịọ maka enyemaka. Ana m eme nke a n'ihi na achọrọ m ịnọnyere gị. Achọrọ m inyere gị aka.
Achọrọ m inyere gị aka ịga nke ọma. All nri, jisie. Jisie na-ọzọ ajụjụ ọnụ na-ahụ na ị na-esonụ.
Ka ọ dị. Ọ bụrụ n’ịchọtara isiokwu a nyere aka, nye ya isi mkpịsị aka ma denye aha na Channel m ka e wee gwa gị oge ọ bụla m biputere isiokwu ọhụrụ. Na site na subscribing m, ị na-akwado m, m ozi na nke a ọwa.
Obi ga-adị m ezigbo ụtọ na ya. Press ịdenye aha.
Gịnị kpatara Skype m anaghị arụ ọrụ?
Skypeagaghịọrụma ọ bụrụ na ị na-adịghị a netwọk njikọ. Nke a bụ eziokwu ma ọ bụrụ na ị na-eji yaSkypeọ bụla na ngwaọrụ, ọ ga-abụ na web, ekwentị gị, na kọmputa, wdg ... Ọ bụrụ na ndị ọzọ weebụsaịtị bụna-arụ ọrụkwesịrị, ihe kpatara yaSkypeike ime ka oku ma ọ bụ ya mere o ji na-enwe ama esịn oku nwere ike na-metụtara bandwit ojiji.
Olileanya na ọ bụ ntakịrị ihe anya na-adịghị mgbagwoju anya. Ya mere, ihe ichoro ime bu igodo Windows na igodo di otu oge ka ihe ngwangwa igba oso gha aputa ma oburu na i pughi ya na akpa iko ozo n'ihi na igha ibu oke ninja mgbe ụfọdụ, umm ihe ịchọrọ ime bụ tinye MS config wee pịa OK ọzọ nke ahụ bụ igodo Windows + R n'otu oge ahụ achọghị m ijide igodo Windows wee pịa oge anyị wee pịa windo nhazi nke usoro a na-egosipụta.
Yabụ ịchọrọ ịga Boot taabụ iji lelee Safeboot wee hụ elele na ị họrọ bọtịnụ redio redio SS wee pịa OK ma gwa gị ka ị bidogharịa ogwe aka kọmputa gị ma ọ ga-aga reboot tinye ya n'ọnọdụ nchekwa m ga-gbanyụọ nke a dị ka m mere pịa kagbuo na ihe ị chọrọ ime otu ugboro na nchekwa mode bụ otu ihe pịa windo mgbe ụfọdụ yeah anaghị arụ ọrụ mgbe niile ka m wee laghachi okhere Ya mere, ị ga-aga ihe ị chọrọ ime, pịnye% ngwa-data wee pịnye% um na faịlị Windows, ụfọdụ ihe enweghị isi ka ị wee pịnye ha ka i wee nwee ike bido n'udo wee pịa umm tap ọzọ wee pịa ok ọ ga-emepe folda gị appdata. bụ ihe ị chọrọ ime na mma mode, ma ọ bụrụ na ị na-adịghị na mma mode, anyị na-ọ naghị arụ ọrụ na ị na-adịghị ikike ime otú ahụ, ma mgbe ị na na-na na na nchekwa na ọnọdụ ị ga-ahụ a Skype folder , eem, aga n'ihu ma na pịa na na na Gbanwé aha na na Skype - ma ọ bụ Skype okenye ma ọ bụ ihe na mgbe ihe mgbe ị na-eme na ọ dịghị popup, dịkwa mma mgbe ty pe na EMmsconfig ọzọ, um oge a ihe ị ga - eme bụ ịlaghachi na ọnọdụ oge niile wee họrọ ka ịlele nke a ma gbanyụọ Naanị ị pịa OK ma kọmputa gị ga - amaliteghachi na ọnọdụ mgbe niile yana ihe ị kwesịrị mee n'oge a ma mepee skype gị na desktọọpụ wee banye ozugbo ị banyere ọ ga-abụ oghere ị gaghị ahụ ndị enyi gị ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla Atụla ụjọ Skype nwere ike dị ka nkeji ise ma ọ bụ nkeji iri ọ ga-emekọrịta ihe niile nke kọntaktị ndị ahụ na ihe niile dị mma na gị. Nwere kọntaktị gị ndabere na i nwere ike n mkpọchi Skype enweghị njehie a. Echere na ịchọta isiokwu a na-enye aka ma jide n'aka na ị masịrị ọwa m ma gaa na weebụsaịtị m yanphone otu comm m na-eme ahịa dijitalụ na ịkekọrịta ọtụtụ ihe ahịa ahịa dijitalụ dị mma n'ebe ahụ, um, m gụrụ jet2.com pịa ntọhapụ na m dị nnọọ ngwa ngwa ugbu a ma eleghị anya ị gaghị adọta ma ọ bụ isi mgbe ị chọrọ nkwupụta mgbasa ozi ma chọọ ya ka ọ dị n'elu n'agbanyeghị na ị chọrọ iji igwe eji akọ akụkọ pịa mana ị nwere ike nweta njikọ na weebụsaịtị ahụ kwa ihenhọrọ 401calm ah ekele gị nke ukwuu nke na-ekiri isiokwu a bụ Olileanya na-enye aka
Ihe mere Skype?
Site July 2021,Skypega-apụ n'anya, onye ọ bụla nke chọrọ ịkpọ oku vidiyo azụmahịa site na ngwaahịa Microsoft ga-apụ n'anyanwereiji Otu. Ọ bụghị na ndị mmadụ na-eji ihe dị ka mbugharị, nke ritere uru site na nnwere onwe ibudata na ntụkwasị obi karịa ndị na-asọmpi ya.12 Ka 2020
Gịnị mere Skype-arụ ọrụ na Windows 10?
Iwepụ na reinstallSkypemakaWindows 10. Ọkụ na Malite NchNhr, emeghe Ntọala> Ngwa ọdịnala ma chọọ makaSkypengwa. Pịa akanri na ngwa ma họrọ Uninstall. Ugbu a, reinstallSkypemakaWindows 10site launching naMicrosoftChekwaa, chọọ ya, wee budata ya ọzọ.9 nwere ike 2020
Ọbụlagodi na ị na-eji Windows ruo mgbe ebighi ebi, enwere ike ị nwere ọtụtụ ntọala ị na-amabeghị na ndabara na ọ ga-abụrịrị na ị ga-agbanwe. Ndị a nwere ike ịbụ ntọala maka nzuzo, mma, ma ọ bụ nanị na ịba uru na general.I'll laa site a ọnụ ọgụgụ nke ntọala Windows, karịsịa Windows 10, na m chere na i kwesịrị ịgbanwe ozugbo, gụnyere ihe ndị ị ga-agbanyụ na ọbụna atụmatụ nke dị mma ma ọ bụghị na ndabara enwere ihe dị ka 15 n'ime ndị a wee nwee olile anya na ị ga-amụta opekata mpe ndị ọhụrụ.
Anyị agaba. Mbụ, ka anyị gaa Windows Update Ntọala. Iji banye na windo ntọala, pịa pịa menu mmalite, wee pịa Gaa na Mmelite & Nche, chọọ 'Advanced options' wee pịa 'Họrọ otu esi etinye ndozi'.
Ebe a, jide n'aka na ọnọdụ n'okpuru atọrọ 'PC na m obodo network'. na ọ bụghị ndị ọzọ na PC na Internet. Gịnị ga-eme bụ download akụkụ nke f mmelite si ọzọ ndị nwere update ka e weere adị n'elu downloads.
Mana ọ ga-ezigakwa ndị ọzọ akụkụ nke mmelite gị ma rie bandwidth. Na mpaghara gị na netwọk ọ dịghị mkpa, mana ị nwere ike iwepu nke a kpamkpam site na ịpị ọkụ ọkụ na elu iji gbanyụọ. Next, ka ịgbanwe ụfọdụ WiFi ntọala.
Back na isi ntọala window gaa Network & Internet na mgbe ahụ ka WiFi tab. N'okpuru WiFi -Services ị ga-ahụ abụọ nhọrọ na okwu banyere aro oghe hotspots. M ga-gbanyụọ ma.
Ebe a tụrụ aro ka a bụrụ ebe ọkụ ga-esi bụrụ nke Microsoft kọwapụtara dị ka 'legit' na nke a ga-eme ka kọmputa gị nwee ike jikọọ na ha na-akpaghị aka ịjụ, ọ bụ naanị ịkwa emo. N'okpuru ebe a bụ ntọala maka Hotspot 2.0, nkà na ụzụ ọhụrụ dị ọhụrụ, ma ị nwere ike ịhapụ nke ahụ.
M ga-aga n'ime na a n'isiokwu a. Ugbu a, anyị nwere ike ịgafe ọtụtụ ntọala nzuzo wee kpochapụ ha niile n'otu oge. Ya mere, gaa na Ntọala na mgbe ahụ ka Nzuzo.
First anyị na-amalite na a n'ozuzu tab. Ị ga-hoo haa na ikpochapụ mbụ igbe na eleghị anya na nke abụọ igbe ọma. Ndị a na-enye ohere weebụsaịtị na ngwa iji soro gị site na iji 'ID Mgbasa Ozi' pụrụ iche iji mụtakwuo banyere gị ma gosi gị mgbasa ozi ndị dị mkpa karị.
Onye na-esote ndepụta asụsụ gị nwere ike ọ baghị uru, mana m gbanyụrụ ya; ma ọ bụrụ na ị na-eji a asụsụ ndị ọzọ karịa English, ị pụrụ iji na-ahapụ ya on. Ọnọdụ nke atọ bụkwa ihe ị nwere ike ma ọ bụ ịchọghị iwepu. Ọ nnoo na-esochi nke mmemme ị na-amalite ọtụtụ mgbe ị nwere ndepụta 'akacha eji' na menu mmalite.
Ọ bụrụ na ị na-elekọta, gbanyụọ ya. The ọzọ tab anyị ga-ele anya na ya bụ 'Speech, ink dee, na Input. '' Nke a na atụmatụ ihu ọma na-ede ihe niile ị pịnye ma ọ bụ na-ekwu na cortana, na virtual nnyemaaka, na o doro anya na iji ya na-esi mara na ị na-eme ka mma aro gbanyụọ, otú dị nnọọ ka na anya.
Vekwaga na ebe taabụ. Kwụsị ụsụ ahụ, ọ bụrụ na ịchọghị ka Windows ngwa jiri ọnọdụ gị, gbanyụọ ha. Ọ bụrụ n’inwere ụfọdụ ngwa ịchọrọ ikwe, ịnwere ike ịgbanye atụmatụ ahụ wee gbanye ma gbanye ngwa ndị ahụ na ndepụta otu otu mgbe ị debanyere akwụkwọ.
Taabụ na-esote bụ 'Nzaghachi na nyocha' nke na-agbanwezi etu Windows si eji Windows wee zipụ ya na Microsoft. Na nwute, Microsoft anaghị eme ka ọ dị mfe iji gbanyụọ ya kpamkpam, nke ahụ ga-akarị nke isiokwu a iji kpokọta ha. Ma ọ bụghị ya, lee ihe ọ na-achụ.
Nchọgharị nchọgharị, dịka. Ka ihe atụ, ihe nrụọrụ weebụ ị nwere ike nleta, 'feature ojiji' nke nwere ike pụtara ihe ọ bụla, 'dee na-abanye data' nke bụ n'ụzọ nkịtị niile ị pịnyere.
Yabụ ee, ị achọghị n'ezie ịnwe ya na Full. Ma eleghị anya, ị gbanyụọ mgba ọkụ n'okpuru via bespoke Ahụmahụ dị ka mma. Ndien ke akpatre maka mwube nzuzo, ndị a na-n'ezie pụtara kpọmkwem maka Cortana.
Iji nweta ya, pịa bọtịnụ Cortana, wee pịa akụrụngwa. Ma ọ bụ chọọ 'Ntọala Cortana' na menu mmalite. chọrọ iwepu ihe ndị a niile.
Ọ bụrụ na ị na-eji Cortana, ị nwere ike ịgafe ihe ndị a ma gbanwee ihe ịchọrọ ịgbaso. Mana m kwadoro ịkwagide Cortana na ihuenyo mkpọchi, ma ọ bụghị na mmadụ nwere ike ịnweta ọtụtụ data gị ọbụlagodi mgbe akpọchiri kọmputa ahụ. Na na na, ugbu a ka na-eme ihe banyere ndị niile na pesky Ịma Ọkwa na Windows yiri ka a ga-enye gị niile.
Ya mere, gaa Ntọala, Sistemụ, ificationsma Ọkwa na Omume. Onwe m, agaghị m agbanyụ amamọkwa kpamkpam n'ihi na ha nwere ike ịba uru, mana ọ bụrụ na ị hụ ngwa nke kachasị iwe, ị nwere ike gbadaa ma gbanyụọ ikike igosi ọkwa. N'elu nke ahụ, ị ​​nwere ike ịchọrọ ịgbanyụọ nhọrọ iji gosipụta ọkwa na ihuenyo mkpọchi.
Dị ka ị maara, a ngosi nwere ike mgbe ụfọdụ na-egosipụta onwe ozi dị ka email. Ọzọkwa, m ga-eme ka 'Zoo ificationsma Ọkwa mgbe duplicating ihuenyo' nhọrọ. Ọmụmaatụ, were ya na ị na-aga inye ihe ngosi na ịkwụnye kọmputa gị n'ime a projector, ọzọ ị na-achọghị ịhụ a ngosi na ihuenyo na chebaara ọdịnaya na onye ọ bụla nwere ike ịhụ.
Ugbu a ị na-adịghị echegbu onwe ọzọ. N’ikpeazụ, ị nwere ike gbanyụọ amamọkwa maka usoro na aghụghọ nwere ike iwe. N'ikwu okwu banyere mkpasu iwe, ka anyị gbanyụọ ngwa ngwa 'akwadoro' ị hụrụ na menu mmalite, nke bụ mgbasa ozi.
Na Ntọala, gaa Personalization, Malite na Uncheck ebe 'Mgbe ụfọdụ aro na-egosi na Malite'. Ọzọ anyị chọrọ ịgbanwe ntọala n'okpuru Ntọala, Egwuregwu, Egwuregwu DVR, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanyụ nhọrọ nke na-ekwu 'Dekọọ na ndabere mgbe m na-egwu egwuregwu'. Ọ bụrụ na ịhapụ nke a, ọ pụtara na oge ọ bụla ị na-egwu egwuregwu, ọbụlagodi na ịnweghị ịchekwa ya, ọ ga-edekọ ederede oge niile, nke ga-eji akụ wee nwee ike mebie arụmọrụ.
Otu ntọala ị nwere ike ịchọrọ mgbe egwuregwu bụ Game Game, nke ga-apụta naanị ma ọ bụrụ na ị nwere ụdị mmelite kachasị ọhụrụ nke Windows. Nke a na ọnọdụ ndị e weere onwe elu usoro ego gị egwuregwu ma ọ bụrụ na gị na kọmputa bụ n'ezie crappy. Ezie LinusTechTips, ọzọ tech ọwa, mere ụfọdụ ule na chọpụtara na ọ na-eme obere ihe dị iche na kọmputa na ihe ezi uche arụmọrụ ma, na nke a, pụrụ n'ezie ibelata arụmọrụ.
Yabụ ma eleghị anya gbanyụọ ya, belụsọ na ịnwere kọmputa ochie ochie mgbe ahụ ọ nwere ike inye aka. Ugbu a anyị nwere ọtụtụ ihe nwere nkwarụ otú anya, ya mere, otú banyere ma ọ bụrụ na anyị n'ezie chọta ụfọdụ mara mma atụmatụ na Kwado. Nke mbu bu ihe di nma karie nke akpọrọ 'Night Light' nke enwere ike ịchọta ya na Ntọala, sistemụ, na taabụ 'Ngosiputa', mana akụrụngwa a ga - apụta naanị ma ọ bụrụ na inwere ọhụụ akpọrọ Ndị Mmezi Mmelite.
Njirimara a na-agbanwe agba nke ihuenyo n'abalị ka ọ dị mfe na anya ma ghara ịkpaghasị ụra gị na-akpaghasị atụmatụ dị ukwuu. Ọ na - eme nke a site na ịchacha ọkụ na - acha anụnụ anụnụ, nke na - eme ka anyị nọrọ n'abalị karịa ka anyị ga - achọ ịnọ Ntọala ọkụ abalị ị nwere ike ịtọ ike nke mmetụta na oge a ga - arụ ọrụ ya, gụnyere ọdịda anyanwụ ruo edem usiahautịn. Ma gị mkpa nwere Location Services tụgharịa na ọ bụrụ na ị chọrọ ime nke a.
Ọ bụrụ na m bụ gị, m ga-akụzi ya n'ụzọ kachasị ike. Mee ka ọ bụrụ ya na abalị. Ebe a na-a ole na ole ọzọ na ntọala ị nwere ike maka Windows Explorer.
Dị nnọọ imeghe ọ bụla Explorer taabụ dị ka My Computer ma ọ bụ ihe ọ bụla. Pịa na Lee na elu, wee chọpụta igbe abụọ maka 'Aha Aha Njikwa'. na 'Ihe ezoro ezo.' Ọ bụrụ n ’otu ihe kpatara na ndị a anaghị egosiputa, ị nwere ike ịchọta otu ntọala ahụ site na ịpị Nhọrọ wee gaa Lee taabụ.
Igbe nlele nke mbụ na-eme ka o doo anya na maka faịlụ ọ bụla na kọmputa gị, ọ ga-enwe ndọtị faịlụ na aha faịlụ ahụ. Ya mere egosiputara aha faịlụ zuru ezu. Nke a dị ezigbo mkpa maka ọtụtụ ihe.
Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ibudata faịlụ na-enyo enyo nke na-azọrọ na ọ bụ edemede, mana ya na ị nwere ike ịhụ na ọ bụ n'ezie faịlụ exe, faịlụ a na-ewepụ! Maa faịlụ a bụ fọrọ nke nta N'ezie a virus, na virus onye pụrụ ọbụna tinye ha adịgboroja faịlụ ndọtị dị ka 'virus.mp4' ma ugbu a, ị pụrụ ịhụ na ezigbo aha bụ 'virus.mp4.exe'.
Ihe omuma atu ozo bu mgbe inwere folda juputara na faịlụ ya na otu akara a agaghi emepe ya site na otu ngwa. N'ụzọ ahụ, ị ​​ka nwere ike ịhụ ụdị faịlụ ha maara na ihe ị na-achọ bụ isiokwu karịa ihe oyiyi ma ọ bụ ihe yiri ya. The ọzọ igbe anyị họrọ bụ maka Zoro ihe.
Ma eleghị anya, ị maara nke a ma ọ bụ na ọ bụghị, mana enwere faịlụ na folda na kọmputa gị nke na-adịghị ahụ gị na ndabara. Ndị a nwere ike ịbụ ntọala faịlụ maka mmemme ụfọdụ ma ọ bụ faịlụ ndekọ. Chọghị ha, mana oge ụfọdụ ị ga - enweta nkuzi ga - egosi gị otu esi edozigharị mmemme na - arutu aka na faịlụ zoro ezo.
Ọ bụrụ na ịgbanyeghị nke a, ị nwere ike iche na faịlụ ahụ apụla. Ọzọkwa, nje na-ike-ezo faịlụ maka doro anya na ihe mere, nke mere nkezi ọrụ nwere fọrọ nke nta na-enweghị ohere nke inwe ike wepu ihe niile na ha onwe ha. Yabụ na ọ dịkarịa ala ọ dị mma ịmara na faịlụ ndị a dị.
Echere m na nke ahụ mara mma na-ekpuchi ihe niile ejiri m n’aka na enwere ụfọdụ ndị m na-ekwughị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịtinyekwu, mee ka anyị mara na ngalaba nkọwa. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ilegide anya, lee isiokwu ndị ọzọ ị ga-achọ dịka: Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ atụmatụ Windows zoro ezo na mmemme ị nwere ike ọ gaghị amata.
Ma ọ bụrụ na ị chọrọ idenye aha, m ga-eme ka ọhụrụ isiokwu ọ bụla Tuesday, Thursday, Saturday. Ana m atụ anya ịnụ olu gị, ya mere ekele maka ikiri, anyị ga-ahụ gị n'oge ọzọ, nwee ọ funụ.
Enwere ụgwọ njikọ maka oku Skype?
Ego njikọ ga-emetụta oku niile na ekwentị na ekwentị ndị ana-eji iji Skype Ebe E Si Nweta, ebe a zara oku ahụ wee dịtee karịa otu nke abụọ. Ejiri njikọ njikọta dị ka ego etinyere na akaụntụ gị. Iji chọpụta ego njikọ metụtara oku gị:
Nwere ike iji Skype na-enweghị njikọ intaneti?
Jiri Skype na-enweghị njikọ Internetntanetị. I nwere ike na-akpọ ndị niile na mba gburugburu ụwa na iji Skype na-aga na-atụ anya Egypt, Morocco, na Nigeria. Nwere ike ịgbakwunye ọnụ ọgụgụ 30 na ndepụta ahụ nke na-ekpuchi ọnụ ọgụgụ mara mma nke kọntaktị na ndepụta ahụ maka ịkpọ oku dị ala. Karịsịa ụgwọ nke ịkpọ oku na-adabere na atụmatụ ị na-eji.
Nwere ike ịkpọ oku ekwentị na ekwentị?
Skype iji gaa na-enye gị ohere ịkpọ ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị mba ofesi oku site na ịnye gị nọmba mpaghara ị ga-eji kpọọ ha. Nwere ike ịkpọ ha ozugbo na Skype ma ọ bụ site na ekwentị ọ bụla ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka. Enwere m ike ịnweta ndenye aha nnwale Skype n'efu? Free ọnwụnwa dị na ụfọdụ na mpaghara ọ bụrụ na ị na-enweghị a na ndenye aha na mbụ.
Ebee ka m nwere ike iji Skype Unlimited n'ụwa?
Skype Unlimited World bụ aha nke na ndenye aha. Mgbe bụ na-eme na-adịru nnọọ ole na ole mba gafee ụwa, dị ka ihe niile na ndebanye aha, o nwere a mkpuchi ebe. Dị njikere na oku ị na-etinye ga-adaba na mpaghara mkpuchi ahụ. Kpọọ landlines na mobiles na: Canada, China, Guam, Hong Kong SAR, Puerto Rico, Singapore, Thailand, ...